သစ်တောတက္ကသိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ဗဟိုသစ်တော လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့် ပညာပေးရေးဌာန (CFTDC)
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း ( MFS)
သစ်တော သုတေသနဌာနဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည့် အခြေခံသစ်တောပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁၁၄)အား (၂)နှစ်သင်တန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ပို့ချနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် သစ်တောကြေးမုံတွင် ဖော်ပြပါရှိသော စာရေးသူ ဒေါက်တာဇော်မင်းဦး (သစ်ထုတ်ရေးဌာန) ရေးသားခဲ့သည့် “ မြန်မာ့မြေက တောဆင်တွေမျိုးတုံး သွားနိုင်သလား” ဆောင်းပါး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဧည့်ထမင်းစားဆောင်၌ FLEGT UNIT အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ
တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အလိုက် တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးရမိမှုများ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ)
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ UNDP,F.A.O တို့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ UN-REDD( Programme Excutive Board PEB)Meeting အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်(အမရ ဟိုတယ်) ၌ ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခြိမ်းခြောက်မှုခံနေရသော မျိုးစိတ်များ၏ နိုင်ငံအဆင့်အနီရောင်စာရင်းရေးဆွဲနိုင်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၄-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက်(၉:၃၀)နာရီအချိန်တွင် သစ်တောသုတေသနဌာန(ရေဆင်း)၊စုဝေးခန်းမ၌ကျင်းပ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကို ယနေ့နံနက်(၇:၃၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ရန်အောင်မြင်ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် (၁၆)၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း တက်ရောက်၍ ကျွန်းပင်စိုက်ပျိုးပေး
ကျွန်းစိုက်ခင်းများ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
(၁၈-၅-၂၀၁၇ )ရက်နေ့(၁၅ : ဝ၀)နာရီတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ၌ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညီကျော်အား(A.D.B) ကိုယ်စားလှယ်များမှ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
“မဲခေါင်သစ်တောများအတွက် ဒေသခံတို့အသံ” စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန နှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော လေ့ကျင့်ပညာပေးရေး ဗဟိုဌာန (RECOFTC- Centre for the People and Forest) ၊ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထူထောင်ထိန်းသိမ်းရေးကွန်ယက် (MERN-Myanmar Environmental Restoration Network) နှင့် WWF (World Wildlife Fund) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ယနေ့ နံနက်(၉:၃၀) အချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသည့် “မဲခေါင်သစ်တောများအတွက် ဒေသခံတို့အသံ” စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းတက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီမြို့နယ်တွင် ဆင်မုဆိုးများအား ဆင်သားရေခွံ ခြောက်လက်နက်များနှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိခြင်း
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ အဖိုးတန်သယံဇာတများ ရေရှည်တည်တံ့စေရေး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိပြီး သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံးမျိုးကွဲများအား တရားမဝင်ထုတ်ယူဖမ်းဆီးသယ်ဆောင်ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားခြင်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညီကျော်အား အီတလီနိုင်ငံ Instituto Oikos မှ Ms.Tania Miorin ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အင်ကြင်းခန်းမ၌ ၁၅-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ (၁၁ : ဝ၀)နာရီအချိန်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညီကျော်အား အီတလီနိုင်ငံ Instituto Oikos မှ Ms.Tania Miorin ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
CF unit အစည်းအဝေး
(၉-၅-၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၃ : ဝ၀)နာရီတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၄/၂၀၁၇ CF unit အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ခါကာဘိုရာဇီဒေသအား ကမ္ဘာ့သဘာဝအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်နေရာအဖြစ် အမည်စာရင်းအဆိုပြုနိုင်ရေး စတုတ္ထအကြိမ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန နှင့် ကုလသမဂ္ဂပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization-UNESCO) တို့ပူးပေါင်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ခါကာဘိုရာဇီဒေသအား ကမ္ဘာ့သဘာဝအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်နေရာအဖြစ် အမည်စာရင်းအဆိုပြုနိုင်ရေး စတုတ္ထအကြိမ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို (၉-၅-၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ (၀၉ : ဝ၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော် (အမရဟိုတယ်)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ငလိုက်ဆည်အား အခြေပြု၍ ငလိုက်စခန်းသာဆင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းဖွင့်ပွဲ
နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဥတ္တရသိရိမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း၊ မိုင်တိုင် (၂၁၇/၀) မှ (၂ ) ဖာလုံခန့်အကွာ၊ ငလိုက်ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၇၈)တွင် ငလိုက်ဆည်အား အခြေပြု၍ ငလိုက်စခန်းသာဆင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းကို (၈-၅-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအချိန် တွင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
အင်းလေးကန်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရေအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာများ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်း မ၌ ၈-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ (၀၉ : ဝ၀)နာရီအချိန်တွင် ရေဝေရေလဲအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဘိုနီအား JICA မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr.Takahiro Morita ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
“မိတ္ထီလာကန် ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း” ၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ကော်မတီအစည်းအဝေး
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ ဘက်စုံရေသယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် “မိတ္ထီလာကန်ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း”၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးကို သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ (၅-၅-၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောဝန်ထမ်းများမှ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းခြင်းအစီအစဉ်
(၅-၅-၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၁၅ : ဝ၀)နာရီတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အင်ကြင်းခန်းမ၌ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောဝန်ထမ်းများမှ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းခြင်းအစီအစဉ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
သစ္ေတာဦးစီးဌာန ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မတ္တရာမြို့နယ်အတွင်း ပုံစံ(၈) စာရင်းဝင် ကျွန်းတံခါးရွက်ဆိုဒ်စုံ၊ ကျွန်းခွဲသား၊ လှည်းဒေါက်၊ ပိတောက်သစ်၊ လှည်းနန်းအိုး၊ ထင်း၊ မီးသွေး၊ ကျွန်းထင်းခြမ်းများအား အောက်ပါလပ်ပုံ အမှတ်များဖြင့် မတ္တရာမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရှိရုံး၌ ၂၀၁
18 August, 2017 Friday
8 August, 2017 Tuesday
ပုံစံ(၈)စာရင်းဝင် အခြားသစ်လုံး/ခွဲသားများအား လေလံတင်ရောင်းချမည့်ကြော်ငြာ
13 July, 2017 Thursday
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်အတွင်းရှိ ပုံစံ(၈)ဝင် သစ်လုံး/ ခွဲသားများအား လေလံတင်ရောင်းချမည့်ကြော်ငြာ
10 July, 2017 Monday
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ သာစည်မြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပုံစံ(၈)စာရင်းဝင် အုပ်စု(II, III, အခြား) သစ်လုံး/ ခွဲသားများအား လေလံတင်ရောင်းချရန်ကြော်ငြာ
6 July, 2017 Thursday
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ နတ်တလင်းမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပုံစံ(၈)ဝင် လွှဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချမည့်အစီအစဉ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပုံစံ(၈)ဝင် မီးသွေးများအား လေလံတင်ရောင်းချမည့်အစီအစဉ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ဒိုက်ဦးမြို့နယ်နှင့် ညောင်လေးပင်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပုံစံ(၈)ဝင် ကျွန်း(သစ်/ခွဲသား/ခွဲခြမ်း/ဖရုံစိတ်)နှင့် ထင်းရှူးပေါက်ခြမ်းများအား လေလံတင်ရောင်းချမည့်အစီအစဉ်
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီး၊ ကလော၊ ဆီဆိုင်နှင့် ရွာငံမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပုံစံ(၈)ဝင် ကျွန်း၊ သစ်မာ၊ အခြားသစ်လုံး/ခွဲသား၊ တိုင်၊ အင်ပျဉ်ဖြတ်စ၊ ထင်း၊ မီးသွေး၊ စက်လှေ၊ အင်ဂျင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချမည့်အစီအစဉ်
7 March, 2017 Tuesday
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပုံစံ(၈)ဝင် မီးသွေးများအား လေလံတင်ရောင်းချမည့်အစီအစဉ်
23 February, 2017 Thursday
Ministry of Environmental Conservation and Forestry
Forest Department on Facebook
Asia's Largest Online Timber Community
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Office : NO-39, Forest Department, Nay Pyi Taw . www.forestdepartment.gov.mm . irfdmyanmar@gmail.com